Kazakhstan: mpanao gazety novonoina, tsy miankina amin’ny asa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2009 12:15 GMT
Sayat Shulembayev, 28 taona , mpanao gazety ao amin'ilay vohikalam-baovao sy horonantsary “Stan” dia novonoina tamin'ny fomba mahatsiravina tany Almaty. Araka ny lazain'ny mpamorona ny “Stan” , nanofa efitra iray tao amina trano akaikin'ny fiantsonan'ny fiara mpitatitra i Sayat. Novonoin'ireo mpamono olona i Sayat sy ny tompon-trano, araka ny hita, mba tsy hisian'izay mety ho vavolombelona [ru]. Tsy mampifandray ilay vono-olona amin'ny asa fanaovan-gazetin'ity niharam-bono moa ilay vohikalam-baovao.
Ny tanàna misy io fiantsonan'ny fiara mpitatitra io dia raisina ho iray amin'ireo be jiolahim-boto indrindra ao amin'ny renivohitr'i Kazakhstan taloha. Inoana fa nanana fifandraisana tamin'izany sehatra izany ilay tompon-trano. Andro maromaro talohan'ny famonoana dia nahazo taratasy fandrahonana izy ary nampitandrina an'i Sayat, nefa tsy dia noraisin'ity mpanao gazety ho zava-dehibe izany. Nahazo tsatok'antsy maro izy raha teo am-patoriana.
Manoratra i Adam Kesher [ru]:
Nahafantatra azy aho ary vao haingana no nifanena taminy tao amin'ny teatra. Henjana be fa tena tsy hainao mihitsy ny andro hahitànao lehilahy iray farany amin'ny androm-piainanao. Tsy hitako izay tenenina. Araka ny lazain'ireo mpiara-miasa taminy, “tsy noho ny asa fanadihadiana nataony izao. Fa noho izy nipetraka tanaty fiaraha-monina ratsy. Ary izany dia vao maika mahatonga ity loza ho mampivarahontsana kokoa.
Manoratra i Mursya ao amin'ny Facebook [ru]:
Efa hatrany an-tsekoly no nifankalalanay. Faly ery izy fa hifindra any Almaty [avy any Semipalatinsk, faritany any avaratra-atsinanan'i Kazakhstan], nitantara tamiko tamim-pireharehana momba ny asany tamin'ny fanaovana dokam-barotra sy ny fanaovan-gazety taty aoriana… Mandria am-piadanana
Luginka, mpiara-miasa amin'i Sayat Shulembayev, dia manoratra ao amin'ny blaoginy [ru]:
Mety hiaingitraingitra sy hanesoeso arak'izay tsy zaka izy. Te-hanara-damaody izy ary tena tia nanao fety. Nanao sangisangy manarabiraby izy nefa mora tezitra nohon'ny sangisangy iray. Mpamaky boky saro-takarina izy ary nanana toetra tia mifaninana.
Androany dia nalain'ireo tobim-pahitalavitra rehetra sary ny biraony. Manoratra ny faravelomany ao amin'ny “Vkontakte” [tambajotra sosialy] ny olona. Nitatitra momba ilay vono-olona ireo masoivohom-baovao ao Kazakhstan ary nilaza fa mety nisy ambadika politika izao. Nefa vono-olona toy ny mahazatra ihany iny, ary ny maha-sadasada azy vao mainka naharatsy azy kokoa.
Diso fotoana sy toerana izy. Nanofa efitra tany amina tanàna ratsy izy, mety noho ny fandefasany ny ampahany betsaka amin'ny karamany any amin'ireo fianakaviany. Ilay tompon-trano nanana olana goavana, ary Sayat natory tao an'efitranony. Saika hiova trano izy amin'ny 30 Desambra. Ny fehezanteny farany nolazainy tao amin'ny fandaharana farany nataony dia ny hoe: “Any aloha any ny fiainana manontolo”.
Nivoaka koa tao amin'ny neweurasia